Otu esi ahụ ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ Instagram gị | Gam akporosis
Otu esi achọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ Instagram gị
Edere Ferreno | | Nche, Gam akporo Ndị aghụghọ
Instagram bụ ngwa nke ewu ewu ya rịrị elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe ewu ewu a emeela ka hacks, ohere na-ezighi ezi na akaụntụ ma ọ bụ izu ohi amụbawo nke ukwuu na ya. Ya mere, ọ nwere ike bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ anyị na-enweghị ikike anyị na enweghị mmata anyị.
Ọ bụ ezie na nke bụ eziokwu bụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ngwa ọrụ ga-enyere anyị aka n'okwu a. Ebe o nwere ọrụ nke anyị nwere ike lee ma mmadu abanyela ma obu banye na akaụntụ Instagram anyị. A ezi ụzọ na-ruo ụbọchị na akaụntụ anyị.
Ka oge na-aga, e webatara ọtụtụ usoro na Instagram iji meziwanye nchekwa na nzuzo nke akaụntụ ahụ, chee echiche banyere ihe atụ dị ka nkwenye nzọụkwụ abụọ na otu. A atụmatụ na e webatara na ngwa bụ logon akụkọ ihe mere eme, nke ị nwere ike ịhụ oge niile ị banyere ma ọ bụ banye n'ime akaụntụ kwuru na netwọkụ mmekọrịta.
Aha aha nke oru bu Nbanye. Ọ ga-ahapụ anyị data nke oge ndị abanyela, nke mere na onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịlele ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ ha, site na ụbọchị na oge nke ịbanye nbanye. Anyị nwere ike ịchọpụta ọrụ ụfọdụ nwere ike ọ gaghị adị mma maka akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na iji usoro a, anyị nwere ike ịhụ na mmadụ abanyela na akaụntụ ahụ, ọ dị mkpa ịme ihe. Ebe ọ bụ na-agbanwe paswọọdụ, ma ọ bụ mee ka nkwenye nzọụkwụ abụọ rụọ ọrụ na akaụntụ ahụ.
Ọrụ nbanye Instagram
Ihe mbụ anyị ga - eme n'okwu a bụ imeghe Instagram na ekwentị gam akporo anyị wee banye na akaụntụ anyị. Ozugbo n'ime ngwa ahụ, anyị ga-abanye profaịlụ anyị, wee pịa akara ngosi ahụ na ọnya atọ dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Site na nhọrọ ndị na-apụta anyị tinye nhazi, nke dị na ala nke ihuenyo ahụ.
Na ntọala akaụntụ anyị na-ahụ ngalaba dị iche iche. Otu ihe masịrị anyị n'okwu a bụ nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-eji ụdị ochie nke ngwa ahụ, ọ bụ ngalaba Nzuzo na Nchekwa, ebe ọ bụ na e kewapụrụ ngalaba abụọ a na nsụgharị ọhụrụ nke ngwa ahụ. Anyị abanyezie na ngalaba Nche wee lelee ngalaba a na-akpọ Access Data, nke bụ ebe anyị ga-abanye, yabụ anyị pịa ya.
Ọ ga-ewe sekọnd ole na ole iji bulie ma anyị chọta usoro data gbasara akaụntụ Instagram anyị. Anyị ga-eji ihe eji eme ihe ruo mgbe anyị rutere ngalaba Ọrụ Akaụntụ. Nke a bụ ngalaba na-amasị anyị, ebe anyị nwere ike ịhụ ngalaba na Oge amalite. Iji hụ nbanye akaụntụ ahụ, anyị ga-pịa ederede na-acha anụnụ anụnụ nke na-ekwu Lee niile, ka anyị wee nwee ike ịhụ data a n'ụzọ dị mfe. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ ahụ n'oge ụfọdụ.
Instagram na-emekwa ka anyị hụ akara ngosi. Ọ nwere ike bụrụ na anyị anaghị emechi nnọkọ, mana anyị na-ahụ na mmadụ emechiri nnọkọ, na enwere ụbọchị nke emechiri akaụntụ ahụ na netwọkụ mmekọrịta. Site na ndekọ a, anyị ga-enweta data a n'ụzọ dị mfe. Ya mere anyị nwekwara ike ileba anya na ngalaba a, iji hụ ma enwere ọrụ na-anaghị adịkarị na akaụntụ ahụ. Zọ dị mma iji chọpụta ọrụ ọ bụla na - adịghị mma na akaụntụ ahụ, nke pụtara na anyị ga - eme ka nchekwa ya dịkwuo mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Otu esi achọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ Instagram gị
Agba nke abụọ bụ oghere MMO nke ị na-agagharị na njedebe nke eluigwe na ala na ụyọkọ kpakpando 4961
Usoro: Ngwa ngwa izipu ozi na Instagram